Ma la soo afjaray Khilaafkii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada? - BBC News Somali
Image caption Guddoomiyaha aqalka sare
Mas'uuliyiinta Maamul goboleedka Jubaland ayaa ka soo horjeestay hadalkii shalay ka soo yeeray guddiga aqalka sare ee loo xil saaray xallinta khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, kuwaasi oo ku dhawaaqay in la soo afjaray khilaafka.
Natiijada ay shaaciyeen guddiga waanwaanta ka dhex waday labada dhinac ayaa u muuqatay hadal aad loo sugayay , hase ahaatee waxaa su'aalo badan la iska weydiinayay in cid walba ay ku qanacsantahay.
"War-murtiyeedkan waa bilow fiican oo sheegaya in wada hadal la furi doono, laakiin looma fasiran karo in la soo afjaray ama la dhammeeyay waxyaabihii la isku khilaafsanaa. Dabcan guddiga aqalka sare wuxuu tagi doonaa xarumaha dowlad goboleedyada, halkaas oo ay wada hadal kala sameyn doonaan arrimaha la isku hayo lana rajeynayo in qodobbada ay dowladda Soomaaliya fareen iney fuliso mooyee kuwa kale ay kala hadlaan dowlad goboleedyada ayna dhammeeyaan" ayuu yiri.
"Waa rajo fiican, wax badan ayaan raadineynay cid damaanad qaadda oo arrintan dhexdhexaad ka noqon karta, maadaama dowladda federaalka aysan meesha kasoo qaadin heshiis kasta oo la galo".
Image caption Qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada
Image caption Madaxweyne Xaaf
Warsaxaafadeedkan oo uu ku saxiixnaa guddoomiyaha golahaasi Axmed Ducaale Geelle Xaaf, oo ah madaxweynaha Galmudug, ayaa lagu yiri: "Golaha iskaashiga dowlad goboleedyada Soomaaliyeed (GIDG), isagoo tixraacaya warmurtiyeedkii uu soo saaray Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliyeed kuna taariikheysnaa 24-kii Nofember 2018, kuna saabsanaa xal u helidda khilaafka u dhexeeya Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada.
Goluhu wuxuu diyaar u yahay inuu kala shaqeeyo aqalka sare ee BFS sidii xal loogu heli karo khilaafka jira oo salka ku haya sidii loo fulin lahaa wixii lagu ballamo oo ah dan Soomaaliyeed".
Ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhanka mas'uuliyiinta dowladda federaalka, oo ay mowqifkooda ku muujinayaan.